Candy Crush မှာ Level 10 အောင်ပြီးတဲ့သူတိုင်း Level 2000 ကိုခုန်ပြီးဆော့လို့ရနိုင်မည် – DigitalTimes.com.mm
Candy Crush မှာ Level 10 အောင်ပြီးတဲ့သူတိုင်း Level 2000 ကိုခုန်ပြီးဆော့လို့ရနိုင်မည်
U Min Thant Sep 30, 2016
Pokemon Go, Clash Of Clan, Clash Royale ဂိမ်းတွေကို ဆော့ပြီး ယခင်က ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂိမ်းတစ်မျိုးကို မှတ်မိပါသေးရဲ့လား။ ဟုတ်ပါတယ် Candy Crush Saga ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအနေနဲ့ ယခုအခါ အဓိကမှတ်တိုင် တစ်ရပ်အနေနဲ့ ကစားတဲ့အကြိမ်အရေအတွက် တစ်ထရီလီယံပြည့်မြောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး Candy Crush ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီ King ဟာ အမှတ်တရ ပြုလုပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ အဆင့် (Level) 2000 ကို တန်းဆော့နိုင်မယ့် အစီအစဉ် တစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ဂိမ်းအနေနဲ့ အထင်ကြီးလောက်စရာ ရရှိမှုအဖြစ် ပလက်ဖောင်းအားလုံးကနေ ဂိမ်းဆော့တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ၁ထရီလီယံအထိကို ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့တာပါ။
ဒီအပတ်ထဲမှာ Candy Crush Sega ရဲ့ Level 2000 ပါဝင်တဲ့ Update ထွက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသူတွေအနေနဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း Level 1999 အထိ ပြီးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကစားသမားတွေဟာ Level 10 ကိုပြီးတာနဲ့ Level 2000 ကို ခုန်ပြီးဆော့နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ King ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဂိမ်းကို Android, iOS နဲ့ Windows ပစ္စည်းတွေမှာ စတင်ရရှိနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Candy Crush နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ တစ်ထရီလီယံရောက်တဲ့ 1,000,000,000,000 အကြိမ်ရေဟာ ကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ ပျမ်းမျှ အကြိမ်ရေ ၁၄၀ ကြိမ်ခန့် ကစားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Candy Crush Saga ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အကစားကြဆုံး ပေါ်ပျူလာအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Candy Crush Saga ဂိမ်းကို ကစားသမားတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ဆွဲပြီး (Swipe) လုပ်တဲ့ အရှည်ဟာ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး တာဝါကြီးဖြစ်တဲ့ မီတာ ၈၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ Burj Khalifa တာဝါထက် အဆ ၁၄၀,၀၀၀ ပိုမိုရှည်လျားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂိမ်းကို နှစ်စဉ် ဆွဲပြီး Swipe လုပ်တဲ့ အရှည်ကတော့ ကီလိုမီတာပေါင်း ၄၂,၁၉၇,၅၀၀ ကျော်ရှည်ပြီး ဒီအကွာအဝေးဟာ ကမ္ဘာနဲ့ လကို ၅၄ကြိမ်အသွားအပြန် လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဂိမ်းကို လစဉ်လစဉ်တိုင်းမှာ ကစားတဲ့အကြိမ်ရေ ၁၈ဘီလျံရှိပြီး လူအရောက်အပေါက်နည်းပါးတဲ့ အန္တာတိကတိုက်အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တိုက်ကြီးခုနှစ်တိုက်လုံးကနေ ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ကြေငြာခဲ့ချိန်ကစတင်ပြီး ယခုအထိ ချိုချဉ်အလုံးပေါင်း ၃၀၁.၇ထရီလီယံ ခွဲဖျက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ ကာလာဗုံးပေါင်း ၁.၄ထရီလီယံကို Candy Crush Saga ထဲမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Ref: Phone Arena
About U Min Thant
U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone.
View all posts by U Min Thant
အူရီဒူးမြန်မာမှ ဆုမဲပေါင်းများစွာပါဝင်သည့် ရွှေအိပ်မက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်
ရေစက်လုံးဝမတင်တဲ့ မှန်သားလွှာသစ်တစ်မျိုးကို အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ယူလိုက်တဲ့ Samsung
346 shares89 views
Apple က iPhone X ကို စတင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဟု သတင်းထွက်ပေါ်
Ko Thuya - Sep 22, 2017
မကြာခင်ကပဲ Apple ဟာ ဖုန်း အစိတ်အပိုင်း ရရှိမှု အခက်အခဲများကြောင့် iPhone X ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့ရက်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ် သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုက လူအများစုဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာ iPhone X ကို…
175 shares33 views
ဖုန်းမှ ရောဂါပိုးမွှားများကို သတ်ပေးသလို အားလည်းသွင်းပေးမယ့် PhoneSoap
စမတ်ဖုန်းများမှာ ကပ်ညိနေတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားများဟာ အိမ်သာကထက်တောင် ပိုမိုများပြားတယ်ဆိုတဲ့ သုတေသနရလဒ်များစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စမတ်ဖုန်းများကို အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဆပ်ပြာများ၊ ပေါင်ဒါအမှုန့်များကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ဖုန်းကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် PhoneSoap အမည်ရ…
138 shares47 views
CCleaner ကနေတဆင့် ဝင်ရောက်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးများကို တိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ Hacker များ
Zar Ni Nyein Tun - Sep 22, 2017
Cisco က လုံခြုံရေး သုတေသနများက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းအရ လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဝင်ရောက်လာပြီး သတိပေးချက်တွေမြည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမတော့ စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ထမြည်တဲ့မြည်သံလို့ထင်ပြီး ဟက်ကာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို သတိပေးမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။Cisco ဟာ စက်ပေါင်း 20ကျော်နဲက လည်ပတ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီခွဲ 8 ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ် သတိပေးချက် အမြည်မှာ…
Drone, Tech Update
103 shares23 views
ခေါက်ပြီးသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အလေးချိန်ပေါ့ပါးဆုံးသော Moment Drone
Mobile & Tablets, Mobiles & Tablets, Motorola
218 shares49 views
နောက်လအစမှာ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် ရေလုံစနစ်နဲ့ Moto G5S Plus
Tech Update, Vivo
139 shares108 views
အရင်ကထက် မြင်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့ စွန့်စားလိုက်ကြမလား
Apple, FEATURES, HUBS
854 shares984 views
iPhone X vs Xiaomi Mi Mix2ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း
Android Apple APPS asus Automobiles CAMERAS Cars Facebook feature features GADGETS galaxy note series games GAMING Google Huawei ios iPhone iPhone/ iPad iPhone X issue knowledge LG local Microsoft mobile mobile devices Mobile Games MOBILES mpt news Ooredoo PC/LAPTOPS samsung SCIENCE smart devices smartphones SOCIAL MEDIA Sony TABLETS technology telenor Vivo Websites xiaomi